Waterfall Waterau Fandroana Fandroana Basin Mixer Square Chrome
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets amin'ny fandroana rano / Rano fandroana fandroana rano ao amin'ny fandroana Chrome
Ity fantsom-baravarankara ambony kalitao ity dia mampifangaro mixeur koveta amin'ny rano mangatsiaka miaraka amina faucet sizzling. MJMS13 dia faucet milentika fisaka amin'ny maodely famolavolana ankehitriny. Ny fomba fivezivezanan'ny rano amin'ny riandrano dia miteraka famindrana rano marefo. Tsy mila miady saina momba ny fiparitahan'ny rano izy, izay ateraky ny fivezivezena anaty rano. Napetraka be tao anaty trano fidiovana izy. WOWOW dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo mpamokatra faucet fidiovana avo lenta eto an-tany.
● kalitao ambony kalitao: tsy manan-tsiny amin'ny olona izy satria tsy mandefa akora mampiahiahy.
● Voahosotra Chrome: manohitra ny hery sy tsy azo apetraka ny mixer, ary madio sy tsotra ny manasa azy.
● Cartridge vita amin'ny keramika: tsy tantera-drano izy ary tsy voan'ny hafanana sy mahatohitra.
● Ilaina amin'ny fiadanam-po ny fahamarinana fa ny mixer dia tsy misy firaka velively.
Fomba fiasa ara-teknika:
Weight: 1400 h
Karazan-tànana: fifanarahana iray
Sakan'ny rano: bara 3-5
Hetsika: 7.5 L / min
Refy: ambony manontolo: 175mm
Kitapo fanamarinana fonosana:
1 x faucet amin'ny riandrano lavatory
2 x Hose rano mangatsiaka sy mafana
Fitaovana 1 x
Boky torolàlana 1 x
Ny vovo-mixer vita amin'ny varahina dia manaparitaka volamena miaraka amin'ny famafana azy